ज्योतिषीहरुलाई प्रधामन्त्री ओलीको जवाफः असार लागेपछि के हुन्छ ? पानी पर्छ ! - Experience Best News from Nepal
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्योतिषीहरुले बकवास गर्दै हिँडेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । दक्षिणाको लोभमा ज्योतिषीहरु प्रयोग भएको भन्दै उनले भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।
शनिबार जितगढीमा आयोजित विजयोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय मान्छेले जनतामा जान छाडेर ज्योतिषीलाई दक्षिणा चढाउँदै भविष्यवाणी गरिदिनुपर्‍यो भन्दै उचालिरहेको बताए । उनले ज्योतिषीहरुलाई भ्रममा पार्ने काम नगर्न चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ज्योतिषीहरुले असार लागेपछि के–के हुन्छ भनेर हल्ला चलाइरहेको सुनिन्छ, असार लागेपछि के हुन्छ ? पानी पर्छ ।’
उनले राप्रपातर्फ संकेत गर्दै उनले कतिपयले भने धर्मका नाममा राजनीतिलाई अल्मल्याउन खोजेको बताए । मुलुकले सुशासन र विकासको बाटो समातेको भन्दै उनले अब अल्मलिन नसकिने बताए । नेपाल दुनियाँको गरीब देश हो भन्ने पहिचान बदल्ने आफ्नो अभिष्ट रहेको भन्दै ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा त्यत्तिकै अघि नसारिएको बताए ।
यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरिरहेको समयमा एक स्थानिय युवकले कालोझण्डा देखाए । अर्घाखाँची घर भई बुटवल ११ मजुवा सुकुम्बासी वस्तीमा बस्दै आएका रुद्रप्रसाद घिमिरेले कालोझण्डा देखाएका थिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपरेको थियो । कालो झण्डा देखाउने युवकप्रति सदासयता राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले अह्राएर आएको होला बिचरा भनेका थिए ।
माओवादीले पाएको मत १३ प्रतिशत, एमालेको ३३ प्रतिशत, सत्ता किन गर्ने आधाआधा ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा संसादहरुले झुट प्रसाद ओली बन्न थाले